ဧရာဝတီကိုချစ်သော မြန်မာတို့ရဲ့ Save The Irrawaddy ဟောပြောပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ဧရာဝတီကိုချစ်သော မြန်မာတို့ရဲ့ Save The Irrawaddy ဟောပြောပွဲ
ဧရာဝတီကိုချစ်သော မြန်မာတို့ရဲ့ Save The Irrawaddy ဟောပြောပွဲ
Posted by POL on Sep 12, 2011 in Environment, Myanma News | 29 comments
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ရန်၊ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ကြရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Save The Irrawaddy ဟောပြောပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဟောပြောခဲ့တဲ့သူများကတော့ ကိုမြင့်ဇော်(သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဆောင်သူ)၊ ဒေါက်တာထွန်းလွင်(မိုးလေ၀သပညာရှင်)၊ မောင်စိန်ဝင်း ပုတီးကုန်း(စာရေးဆရာ)၊ ကိုတာ (စာရေးဆရာ) တို့ကဟောပြောခဲ့ကြပြီး ဧရာဝတီကိုချစ်သော စိတ်ပါဝင်စားသူ ၅၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အများစုမှာ လူငယ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဟောပြောချက်များကို www.news-eleven.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လုပ်မယ်တဲ့ ဒီနေ့ ထုတ် weekly eleven မှာလည်းဖတ်လိုက်ရတယ် ဟိုတခါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တုန်းက အထက်ပိုင်းကိုတော့လေ့လာပြီးပြီ မြစ်အောက်ပိုင်းကိုတော့လေ့လာဆဲပဲဆိုပြီးဖတ်လိုက်ရတော့ ဆက်မလုပ်ပဲလေ့လာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ ပြီး ပြန်သုံးသပ်ဦးမယ်ထင်နေတာ ဆက်လုပ်နေတုန်းပါတဲ့ဗျာ
ဟောပြောပွဲဆိုလို့ ဟောပြောပွဲအကြောင်းအရာ စုံလင်စွာ ဖတ်ရပြီလို့ ထင်လိုက်တာ… တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။
ယူထားပြီးကြပြီ….ရှေ့တိုး ထမ်းပိုး…နောက်ဆုပ် လှည်းဒုတ်။
“အခု တစ်လလောက်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီရောဂါနဲ့ အမီလိုက်နေသူများရဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ အခုဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိပါသလား၊ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲလို့ မေးပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ စီမံကိန်းတည်ဆောက်မယ့်ဧရိယာကို ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေ၊ စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာ ရှိတဲ့လူတွေကို ပြန်လည်နေရာချထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ နောက်တစ်ခါ လုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေ စတင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီနေရာကလည်း weather window အရ တစ်နှစ်မှာ ခြောက်လလောက်ပဲ လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် မိုးတွင်းမှာတော့ လုပ်ငန်းရပ်နေတယ်။ နွေရာသီ open season စတာနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်တို့စလုပ်တဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ ရှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နောက်မဆုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ကန့်ကွက်နေလို့ နောက်ဆုတ်မှာလားလို့ မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။ နောက်မဆုတ်ပါဘူး။ ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ UN က ထပ်မံစစ်ဆေးဦးမှာလား၊ UN နဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဆက်ပြီးအောင်မြင်အောင် လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာ ကိစ္စတွေကတော့ နောက်မှရှင်းပြမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ဒီမှာ တက်ရောက်သောသူများ နည်းနည်းလေး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Knowledge လေးရအောင် ကျွန်တော် နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်။ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံးသုံးနှစ်လောက် လေ့လာရပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက် လေ့လာတဲ့အတွင်းမှာ ဒီမြစ်ဝှမ်းကြီးတစ်ခုမှာ ဘယ်နေရာတွေမှာ စီမံကိန်းတွေ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သူရဲ့ Geology အနေအထား၊ သူရဲ့ရေစီးရေလာ Hydrology အနေအထား အကုန်လုံး သုံးနှစ်လောက် လေ့လာရပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက်လေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ ဘယ်နေရာတွေမှာ လုပ်ရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာ proposal လေးတစ်ခုရလာတယ်။ အဲဒီလို proposal လေးရလို့ရှိရင် ဘယ်နေရာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာ ထပ်ပြီးတော့ လေ့လာရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် တစ်နေရာကို ရွေးပြီးတော့ အဲဒါကို ထပ်လေ့လာတာ၊ အသေးစိတ် ထပ်လေ့လာတာ တစ်နှစ်လောက်ကြာပါတယ်။ အဲဒါပြီးတော့မှ ဒီလုပ်မယ့်နေရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ design အသေးစိတ်ဆွဲရပါတယ်။ ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာ အနည်းဆုံး သုံးနှစ်၊ လေးနှစ် မကြာဘဲနဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခု မဖြစ်ပေါ်လာဘူး။ စီမံကိန်းသစ်ကို လုပ်ဆောင်တိုင်းမှာ Tactical အရ ဒါတွေလေ့လာရတဲ့အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အကျိုးသက်ရောက်မှု ဘာတွေရှိမလဲ ဒါကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ လေ့လာရတယ်။ ဒီသက်ရောက်မှုတွေ အားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ကြီးဌာနက မလေ့လာဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံပေးငှားပြီး လေ့လာပါတယ်။ ဥပမာ မြစ်ဆုံကို ပြောတာပေါ့။ မြစ်ဆုံကို လေ့လာတာ ဆိုရင် BANCA က လေ့လာတယ်။ BANCA ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုရင် ၁ ဒသမ ၂၅ သန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပေးရတယ်။ ဒီဟာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ကြီးဌာနက လေ့လာတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လေ့လာပြီးတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လုပ်သလို ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် Third Party ဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကိုလေ့လာခိုင်းပါတယ်။ Tactically အရ နည်းပညာအရ လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံကျော်ဒီဇိုင်းနဲ့ Institute တွေကို ငှားပြီးတော့ လေ့လာရပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် တစ်နေရာ တစ်နေရာမှာ အင်မတန် သေချာတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခု ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းဟာ Environmental အရရော၊ Tactically အရရော သေချာလေ့လာပြီးသား လုပ်တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ဘူး ဆက်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါဆန်းဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေကို ရှင်းသွားအောင်ပြောတာ၊ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကို”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ဒုတိယအချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘီလူးချောင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတည်ဆောက်ပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်ပေးခဲ့အခါ ဒီနေ့အထိ going strong ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည် ၅၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ ဘီလူးချောင်းစီမံကိန်းကြောင့် ဘီလူးချောင်းကြီး ပျက်စီးသွားပြီလို့ ဒီလိုမျိုးတွေ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ကြားဖူးသလား။ မကြားဖူးပါဘူး။ ဒီတော့ ပေါင်းလောင်းစီမံကိန်း မဂ္ဂါဝပ် ၂၈၀ ရှိပါတယ်။ ပေါင်းလောင်းစီမံကိန်းကြီးကြောင့် ပေါင်းလောင်းချောင်းကြီး ပေါင်းလောင်းမြစ်ကြီး ပျက်စီးသွားပြီလား။ မပျက်စီးပါဘူး။ ရဲရွာစီမံကိန်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိမှာ အကြီးဆုံးစီမံကန်း ရဲရွာစီမံကိန်းပါပဲ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလည်း ပေးနေပါတယ်။ ရဲရွာစီမံကိန်းကြောင့် ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလများထက် လျှပ်စစ်သုံးဆလောက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ လျှပ်စစ်မဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ လောက် ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ လောက်က ၅၀၀၊ ၆၀၀ လောက်တောင် အနိုင်နိုင် ပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဲဒီရဲရွာစီမံကိန်းကြောင့် ဒုဋ္ဌ၀တီ မြစ်ကြီး၊ မြစ်ငယ်မြစ်ကြီး ပျက်စီးသွားပြီလား။ မပျက်စီးပါဘူး။ ဒါဟာ အားလုံးအမြင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ environmental နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီအယူအဆနဲ့ ပြောနေဆိုနေကြတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ environmental အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလား မရှိဘူးလား၊ ရှိပါတယ်။ ဒီ သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ မြစ်ချောင်းတစ်ခု ပိတ်လိုက်ရင်၊ အဲဒီမြစ်ချောင်း မှာ reserver ဆိုတာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ reserver ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် reserver အနီးမှာ နေထိုင်တဲ့ သားရဲတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ငှက်ကလေးတွေ နေရာမရှိဘူး၊ ဘာဘူး ညာဘူး။ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေ ပျက်စီးတယ်စသည် ဖြင့်ပေါ့လေ။ လူတွေ စိုက်ဧက နည်းနည်းပါးပါးတွေ ပျက်စီးတယ်၊ လူတွေနေရာ ရွှေ့ပေးရတယ် စသည်ဖြင့် အချက် လေး၊ ငါး၊ ရှစ်ချက်လောက် ရှိပါတယ်။ environmental နဲ့ ပတ်သက်ရင်၊ environmental ပျက်စီးသွားတဲ့ဥစ္စာကြောင့် ခံစားရမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံကရရှိမယ့် အကျိုးအမြတ်ရရှိမှု ဘယ်ဟာက ပိုများသလဲ။ ပိုများတဲ့ အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ ရဲရွာစီမံကိန်းတစ်ခု လုပ်လိုက်တယ်။ မြစ်အထက်မှာရော၊ မြစ်အောက်မှာရော အခုချိန်မှာ ဘယ်လောက်များ ပျက်စီးသွားပြီးတော့ လူတွေက ဒုက္ခသုက္ခ ရောက်နေကြလို့လဲ။ ဒီဧရာဝတီမြစ်မှာလည်း ၎င်းအတိုင်းပါပဲ။ ပျက်စီးမှုနည်းနည်း ပါးပါးရှိပါတယ်။ ဒီဥစ္စာလူတွေက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးလို့ ကျွန်တော်တို့က ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးလို့ ဒါတွေနဲ့ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ နှေးနှေးသွားပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ သန်း ၅၀၊ သန်း ၆၀ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးပြန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လူတွေကဘာတွေ ပြောလဲဆိုတော့ မြစ်ကြီးပိတ်လိုက်ရင် မြစ်ကြီးကခြောက်သွားပြီ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက သေသွားပြီ၊ ကျွန်တော်တို့က မြစ်ကြီးကို ချစ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြစ်ကြီး အသေမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေပေါ့။ ဧရာဝတီမြစ်မှာ စီးဆင်းတဲ့ရေရဲ့ ၇% ကျွန်တော်တို့ ဖမ်းပါတယ်။ နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း မဖမ်းခင်တုန်းက ဧရာဝတီ မြစ်ရဲ့ရေက ဘယ်သွားလဲ။ ပင်လယ်ထဲကိုသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ရေကို ၇% ဖမ်းတယ်။ ၉၃% ဆက်လက်စီးဆင်းနေတဲ့အတွက် မြစ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းက ဘာမှပြောင်းလဲစရာမရှိဘူး။ ၇% ဖမ်းထားတဲ့ရေကို စက်မောင်းပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာက ဂက်စ်တာဘိုင်လို ဂက်စ်ထည့်ရတာ၊ ဒီဇယ်တာဘိုင်လို ဒီဇယ်ထည့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ရေထည့်မောင်းရတာ။ အဲဒီရေနဲ့ မောင်းလိုက်ရင် အဲဒီရေက မြစ်ထဲပြန်စီးသွားမယ်။ အဲဒီတော့ဘာတစ်ခုမှ ရေစီးရေလာ ပြောင်းသွားစရာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားရေး၊ National Interest နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်ဟာက အကျိုးရှိသလဲ။ ဘယ်ဟာက အကျိုးယုတ်သလဲ အဲဒီပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အကျိုးအမြတ်များရင် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးပျက်စီးရင် ကျွန်တော်ခုနက ဖတ်တဲ့ကာတွန်းလို၊ ဒီမှာအများစု ပညာရှင်တွေပါတယ်။ မဟာဗန္ဓုလ အရိုးအိုးစေတီ ဘယ်နားမှာ ရှိသလဲ သိကြသလား။ မသိနိုင်ဘူး။ မဟာဗန္ဓုလ အရိုးအိုးစေတီအစစ်က မင်းလှမှာ၊ မလွန်မင်းလှမှာ ရှိတယ်။ ခွေးသာချောင်းဆိုတဲ့ ခွေးသာချောင်းနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံတဲ့ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအရိုးအိုးစေတီကို ကျွန်တော် တိုင်းဥက္ကဋ္ဌဘ၀က ရွှေ့ပေးခဲ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်လောက်က၊ ကမ်းပါးပြိုမှာစိုးလို့ ရွှေ့ပေးလိုက်ရတယ်။ မြစ်က နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၊ ၂၀၀ ဘယ်သူမှမထိန်းသိမ်းလို့ ပျက်စီးတာ။
“မြစ်ကြီးကို ဘယ်သူမှ မထိန်းသိမ်းခဲ့လို့ မြစ်ကြီးက ပျက်စီးတာ ရေကစီးချင်တဲ့နေရာ လျှောက်စီးနေတာ။ ဒီမြစ်ကို ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်မယ့်လူ ဘယ်သူမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ရေက စီးချင်တဲ့နေရာ လျှောက်စီးနေတာ။ ဆိုပါတော့ ဧရာဝတီမြစ်က အရင်က ကိုက် ၁၀၀ ကျယ်တယ်ဆိုပါတော့၊ အခု ကိုက် ၅၀၀ ကျယ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရေက စီးချင်တဲ့ နေရာ လျှောက်စီးနေလို့။ ဒါကို နိုင်ငံမှာ ဓနအင်အားကြောင့်ရော၊ စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်ရော ဘယ်သူမှ မထိန်းသိမ်းခဲ့ဘူး။ မထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက် ကိုက် ၁၀၀ စီးရမယ့် ရေက ကိုက် ၅၀၀ စီးနေတဲ့အခါ ရေအနက် ပေ ၁၀၀ ရှိရမယ့်နေရာမှာ ပေ ၅၀ ပဲ ရှိမှာပေါ့။ ရေအနက် ငါးပေ ရှိရမယ့်နေရာမှာ ရေကတစ်ပေပဲရှိမှာပေါ့။ ဒါဟာ ဒီမြစ်ကြီးတစ်လျှောက်လုံး ဘယ်သူမှမထိန်းသိမ်းခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားရမယ့် issue က ဘယ်ကို သွားရမယ့် issue လဲဆိုတော့ ဒီမြစ်ကြီး သေသွားမယ်မဟုတ်ဘူး။ ဒီမြစ်ကြီးကို ဘယ်လို ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတဲ့ issue ကို သွားရမှာ။ အဲဒီတော့ ဟိုမှာ ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ သတင်းစာထဲမှာ ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ တရုတ်ကအကျိုးရှိတဲ့ စီမံကိန်းလို့ပြောတယ်။ တရုတ်အကျိုးရှိတယ်။ မြန်မာပြည် အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒီစီမံကိန်းတွေ လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ လုပ်တာ။ ပိုက်ဆံရှိရင် ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်လုပ်မှာပေါ့။ ဒါ နံပါတ်တစ်။ ပိုက်ဆံရှိလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်ပြီးရင် ဒီလျှပ်စစ်ကို ဘယ်သူကသုံးမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူက သုံးမှာလဲ။ သုံးစရာမရှိရင် market ရဲ့သဘောအရ ရောင်းစားရမှာပေါ့။ သုံးစရာမရှိရင် ရောင်းစားရမယ်။ လုပ်မယ့်လူလာရင် ၀ယ်သုံးရမှာ။ ဒါ market ရဲ့ သဘောပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်တဲ့အခါ နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ခေါ်ပြီးတော့ JVDI နဲ့လုပ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က free power ၁၀% အလကားရတယ်။ ဒီကောင်က ၁၈၀၀၀ ထွက်ရင် ကျွန်တော်တို့က ၁၈၀၀ အလကားရမယ်။ free ရတယ်။ နောက်တစ်ခါ သူ့ဆီက သူက လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource ကိုသုံးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၅% အရင်းထည့်ပေးရတယ်။ ကျွန်တော်တို့အရင်း၊ ကျွန်တော်တို့ free share ၁၅% ရတယ်။ ဒီလျှပ်စစ်က Both Country သုံးခွင့်ရှိတဲ့အတွက် နှစ်နိုင်ငံလုံး သုံးခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်သလောက် ၀ယ်သုံးလို့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ရောင်းတိုင်း ရောင်းတိုင်းမှာ ၈% Commercial Tax ရတယ်။ နောက်တစ်ခါ မြတ်တဲ့ဟာရဲ့ ၃၀%။ ကျွန်တော် အမြတ်ဝေစုအဖြစ် ခွဲဝေရရှိတယ်။ တစ်ခါ အခြား မြတ်တဲ့အမြတ်ရဲ့ ၃၀% ခွဲဝေ ရရှိတယ်။ withholding tax ရတယ်။ သူ့ကို perception period တစ်ခုပေးလိုက် ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ပြီးပါပြီ၊ ကုန်ပြီ၊ မင်းပြန်တော့ ဒါကြီးထားခဲ့တော့။ ကိုယ့် နိုင်ငံအပိုင်ဖြစ်တယ်။ ဒီထက် အကျိုးရှိတဲ့ဟာ ဘာရှိမလဲ။ လျှပ်စစ်ဆိုတာ ကွန်တိန်နာနဲ့တင်ရောင်းလို့ မရဘူး။ ကြိုးနဲ့ သွယ်ရောင်းလို့ရတယ်။ ဒီ neighboring country မှတစ်ပါး လျှပ်စစ်ရောင်းလို့မရဘူး။ တရုတ်ကိုရောင်းလို့ရမယ်၊ ထိုင်းကို ရောင်းလို့ရမယ်။ အိန္ဒိယကို ရောင်းလို့ရတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ရောင်းလို့ရမယ်။ လျှပ်စစ်က ကွန်တိန်နာနဲ့မှ ပို့လို့မရဘဲကိုး”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ ပြောဆိုနေကြတာဟာ ထင်ရာမြင်ရာပြောပြီး ထင်ရာမြင်ရာ လျှောက်ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းပြည်ပက ပညာရှင်တွေအားလုံး လေ့လာ သုတေသနပြုလုပ်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ အထောက်အထားတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီး ရေးနေကြတာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်း ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေ၊ အထောက်အထားတွေကို သိရှိကြတဲ့အတွက် သဘောမတူကြောင်း တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ ရဟန်းရှင်လူတွေနဲ့ အနုပညာရှင်၊ စာပေနယ်သားတွေအားလုံးကလည်း ဒါတွေကို သိတဲ့အတွက် ဆက်မလုပ်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုနေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုက တရားသဖြင့် လူယဉ်ကျေးနည်းနဲ့ တောင်းဆိုနေတာကို လျစ်လျူရှုပြီး လုပ်ချင်ရာဆက်လုပ်မယ်၊ ရှေ့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုက မဖြစ်၊ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာ လူယဉ်ကျေးနည်းနဲ့ မရရင် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြပြီး တောင်းဆိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေအတွက် စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်တဲ့သူတွေသာ တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။ မလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေမှာ တာဝန်မရှိဘူး”
“ဒီပရောဂျက်ကို စပြီးလုပ်ကတည်းက ပွင့်လင်းထင်သာမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဧရာဝတီဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းပိုင်တဲ့ အရာပါ။ တစ်ဦးတစ်ယော
Third Party ဖြစ်တဲ့ BANCA အဖွဲ့အစည်းကိုလေ့လာခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်။
BANCA ကို တစ်သန်းခွဲနီးပါးလောက် လုပ်ခပေးပြီး ငှားထားတာဆိုတော့ ကိုးရိုးကားယား မလုပ်ရဲဘူး… အင်တာနက်မှာ တင်ထားတဲ့ report က စာမျက်နှာ ၅၀၀ လောက်ရှိတယ်… အဲဒီထဲမှာ ရေးထားတာ မလိုက်နာဘူးလို့ ပြောကြတယ်… BANCA က ဒီ report ကို တင်လို့ မရဘူး…စာချုပ်နဲ့ ငှားထားတာ၊ မင်းတို့ ဒါလုပ်၊ ပြီးရင် အဲဒီ report ငါ့ပေး… ဒါက Trade Secret ဖြစ်တယ် ပြောလို့မရဘူး လျှို့ဝှက်ထားတာ ဆိုပဲ…
ဟုတ်ပါပီ။ အခု ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒီသမားတွေက ကန့်ကွက်နေကြပီ။ အဲဒီတော့ BANCA က တင်ပြတဲ့အချက်ထဲမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝမထိခိုက်နိုင်ဘူး လို့ပဲ ဖော်ပြထားလား? ဒါမှမဟုတ် အနည်းငယ် ပဲ ထိခိုက်နိုင်မယ်ပြောလား?
၀န်ကြီးအနေနဲ့ BANCA ရဲ့အစီရင်ခံစာ အကုန်ထုတ်ပြောဖို့ မလိုပေမယ့် အားလုံး သံသယရှင်း သွားအောင်လို့တော့ တရားဝင်ထုတ်ပြပီး ငြင်းဆိုရင် မကောင်းဘူးလား?
ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံရင်ပြောတာပါ။ မလုံရင်တော့ မပြနဲ့ပေါ့။
နောက်တစ်ခု ၀န်ကြီးပြောတာ “ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူက သုံးမှာလဲ။ သုံးစရာမရှိရင် market ရဲ့သဘောအရ ရောင်းစားရမှာပေါ့။ သုံးစရာမရှိရင် ရောင်းစားရမယ်။”
တော်လိုက်တဲ့ဝန်ကြီး… မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေရဲ့ စက်တပ်ဆင်အား အပြည့်အ၀ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ချင် ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်… လက်ရှိအချိန်မှာ စာရွက်ပေါ်က စာရင်းကိုပဲ မပြောသင့်ဘူး။ အမှန်တကယ် ဘယ်လောက်ပဲ ထုတ်ပေးနိုင်သလဲ? မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်လင်းနေပီလား? နေပြည်တော်တစ်ခုပဲ အချိန်ပြည့်လင်းနေနိုင်သေးတာ။ ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးတောင် လျှပ်စစ်မီး အပြည့်အ၀မပေးနိုင်သေးတာ အားလုံးအသိပါ။ မျက်ကမ်းမျိုးချစ်စိတ်မထားသင့်တော့ဘူး ဒီအချိန်မှာ။ မျက်စေ့ဖွင့်ထားပီး အမှန်အတိုင်း မြင်သင့်နေပီ။ တကယ်ပိုရင်တော့ေ၇ာင်းစားပါ။ မကန့်ကွက်ပါဘူး။ ပထမဆုံး ကိုယ့်ပြည်တွင်းက နေရာတိုင်း လျှပ်စစ်မီး အမှန်တကယ် အပြည့်အ၀လင်းဖို့ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လုပ်ပေးစေချင်တယ်။
နောက်တစ်ခု … အခုပြောနေတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူး… မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို အခြားနိုင်ငံတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းထားတယ်။ လျှပ်စစ်မီးအပြည့် အ၀မပေးနိုင်လို့ စက်မှုဇုံတွေ၊ ဟိုတယ်တွေ အပါအ၀င် လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ နေအိမ်တွေက ပြည်သူတွေ နိုင်ငံခြားက ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီကို ဈေးကြီးကြီး ပေးတင်သွင်းပီး မောင်းနေရတယ်။ သုံးနေရတယ်။ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့နဲ့သာ လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတွေကို မောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားငွေ ကုန်ကျမှု သက်သာနိုင်ဘူးလား? သေချာ စေတနာထားရင် ကန့်ကွက်ခြင်း ခံရမယ် မထင်ဘူး
ဟုတ်ပါ့ … ရှေ့ကယူသွားတော့ နောက်ကဆက်လုပ်ပေါ့….
ဒီတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ် ဖြစ်တော့တာပေါ့….
ဥရောပနဲ့.. ယူအက်စ်ကမြစ်တွေလို.. နိုင်တဲ့နေရာတွေ.. သဲသောင်တူး.. မြစ်ရေစီးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖေါ်..မြစ်ကမ်းတွေ..ကွန်ခရစ်နဲ့..ဘောင်ခပ်… စတာတွေလုပ်သင့်နေပြီထင်ပါတယ်..။
ကျွန်တော် ချစ်သော ဧရာဝတီ အကြောင်း ပြောကြ ဆိုကြ သူ အားလုံးကို ကျေးဖူးတင်ပါသည်။
မီဂါဝပ် 1500 ကမြန်မာနိုင်ငံသုံးလို့တောင်မကုန်ဘူးတဲ့
အဲ့သည်1500 မီဂါဝပ်ကိုသုံးဘို့မီးကြိုးတောင် သူ့အထွေးတရုပ်စီကဝယ်ရဦးမယ့်အခြေနေမှာရှိနေတဲ့ဟာကို
အိုင်ပီ အောင်ပု ရယ် ဒီကောင်တွေ စောက်ခွက်ပြောင်တာ အခုမှမဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်းများ စွာကပဲ ပြောင်လွန်းတာ နှစ်တွေကြာတော့ သူတို့ကို သူတို့ ပြောင်လို့ပြောင်မှန်းတောင်မသိ တော့ဘူး။ လမ်းဘေးက စောက်ရူးတစ်ယောက် ပြောတဲ့ စကားကမှ ဒင်းတို့ပြောတဲ့ စကားထက် တန်ဖိုးရှိချင်ရှိဦး..မယ်။
အခုပဲ weekly website မှာ တင်ထားတာ တွေ့လို့ပါ
ခုလို ဟိုလူတင်ဒီလူတင်နဲ့ တစ်နေရာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ရတာကောင်းတယ်နော်။
အေးကွာ. ကိုယ့်ထက်အသိပညာကြွယ်ဝသူတွေက ထောက်ပြဝေဖန်တာကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ကောင်တွေကိုတော့ အံ့သြပါတယ်ကွာ။ရာဇဝင်ထဲမှာဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့ ဧရာဝတီရယ် လို့ ဘဲပြောရတော့မယ်ဗျို့
လက်တဆုပ်စာ လူတစု တဘ၀စာကောင်းစားဖို့ အတွက် တပြည်လုံးက ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်သွေးကြောကို ဖောက်ထုတ်ပြီး တမျိုးသားလုံးရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးမဲ့ စီမံကိန်းကို ရင်ထဲ အသဲထဲကကို အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်တယ်။
အပြည့်အစုံ ကို http://www.news-eleven.com မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
၀န်ကြီးရဲ့လေသံက အာဏာရှင်လေသံ မပျောက်တာကိုသတိပြုမိကြမှာပါ။ အဲဒါ နောက်က background
ရှိနေသေးပုံပါဘဲ။ အမှန်က ယနေ့အာဏာရထားသူများကိုယ်တိုင်က သတိကြီးကြီးထားပြီး ငါတို့က
ငါလောက်သိတဲ့သူမရှိဘူး ငါလောက်တတ်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဘဲ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကိုဖိုးတတ်ကြီးတွေ
ကိုဖိုးသိကြီးတွေ အုပ်ချုပ်သွားလိုက်တာ … တက်တက်ပြောင်ပါရောလား။ အောက်တန်းအကျဆုံးနိုင်ငံ မျက်နာအငယ်ရဆုံးနိုင်ငံ အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ရပါရောလား …။ ဒါဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးလို့ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးနဲ့ကြည့်ရင် ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီဟာ ဂျပန်မှာဘဲရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်း
ကတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်ဖြစ် CEO ဖြစ်ဖြစ် မန်နေဂျာ level ဖြစ်ဖြစ် ငါ မင်းတို့ထက်တတ်တယ်
ငါ့ဖာသာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဘယ်တော့မှလုပ်လေ့မရှိဘဲ အောက်ဝန်ထမ်းရဲ့ အကြံဥာဏ်ကိုတလေးတစား
နားထောင်ပြီး စဉ်းစား ဆင်ခြင် သုံးသပ်တဲ့ အလေ့အထရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ … ဆိုကြပါတယ်။
………. ကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဆိုရင် ကျနော်တို့လဲ အတုယူသင့်ရင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်းစားဆင်ခြင် ဝေဖန်ထောက်ရှု ကောင်းသောအမှု ပြုနိုင်ပါစေ …..။
၀န်ကြီးရဲ့လေသံကတော့ မဆန်းပါဘူး။ မျက်နှာဖုံးကွာကျပြီး ဗူးပေါ်သလိုပေါ်တာပါ။ ဒီလူတွေအာဏာရှင်အဖြစ်ကို ရုပ်ပြကလေးတောင်မှ မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို – အယုံလွယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို သက်သေပြတာပါ။
ပြီးတော့ ဒီစကားမပြောပဲလဲ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဆက်လဲလုပ်နေတာပါ။ ဒီစကားက တမင်ပြောတာလို့ နားလည်ကြရမှာပါ။ ဒီလူ ဘယ်လောက်ညံ့တယ်ထား ရူးတော့မရူးသေးဘူး…။ သတိလွတ်ပြီးပြောတဲ့ စကားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အလွတ်ကျက်ပြီးပြောတဲ့ စကားမျိုးပါ။
“မြစ်ဆုံကို လေ့လာတာ ဆိုရင် BANCA က လေ့လာတယ်။ BANCA ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုရင် ၁ ဒသမ ၂၅ သန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပေးရတယ်။ ”
ဟုတ်လား။ အဲဒီ BANCA ကို တရုတ်ကုမ္ပဏီက ၁၀သန်း ၁၅ သန်းပေးထားရင်ရော ????
အဲသလောက်ပိုက်ဆံဆိုတာ စီမံကိန်းကြီးကြီးတွေအဖို့ ဘယ်လောက်မှကို မဟုတ်ပါ။ အဲဒါကတော့ ရမ်းပြောတာ BANCA ဆိုတာ ဘာမှန်းသေသေချာချာမသိပါဘူး။
တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာ အခုလိုဝိုင်းကန့်ကွက်တာခံရတဲ့အခါ third party တင်မက အခြား fourth party တခုခုကိုပါ လေ့လာစေရင် ပိုမကောင်းဘူးလား။
“ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး။”
အဲဒီေ-ာက်ရူး ကိုယ့်စကားကိုယ် ဘယ်ရောက်မှန်းမသိကြောင်း သက်သေပါ။
အဲဒါဆို လက်ရှိတခြားစီမံကိန်းတွေနဲ့ကို ကိုယ်သုံးနိုင်တာထက် အဆများစွာ ပိုထွက်လာတော့မှာမဟုတ်လား။ အဲဒီစီမံကိန်းက ကိုယ့်နိုင်ငံက တကယ်လိုလို့ မဟုတ်မှန်း တခါထဲ အတည်ပြုလိုက်တဲ့စကားပေါ့။
မြစ်ဆုံရေကာတာကြီးကြောင့် အကျိုးရှိတာဘယ်လောက် အကျိုးယုတ်တာဘယ်လောက် ဆိုတာ ထားတော့။
အဲဒါကြီး အကြောင်းတခုခုနဲ့ ကျိုးပျက်သွားရင်ရော ???
ဘာမှမဖြစ်သေးရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဖြစ်လိုက်ရင်တော့ မသက်သာဘူး။ လောလောလတ်လတ် ဂျပန်ဖူကူရှီးမားပြဿနာကသက်သေပါ။
အဲသလောက်ဘေးဒုက္ခသင့်နိုင်တာကြီးကို ဆောက်ပြီးပြီဆိုမှဖြင့် – ဗုံးတလုံး ဖင်ခုထိုင်ထားရသလိုနေမှာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးမှာလဲ အလကားနေရင်း အားနည်းချက်ကြီးတခု ဖြစ်သွားမှာ။ အဲဒါကရော အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားမဟုတ်လို့လား။
ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့် ဘယ်သူသေသေ ကြွက်တွင်းထဲကမထွက်တဲ့ နာဂစ်အစဉ်အလာလေးကလဲရှိသေး…….
အဲဒီဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းဆိုသူက မလေးရှားမှာ မြန်မာစားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ် ကြားပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါ ရွာထဲ မျက်စိလည်လမ်းမှားလာတတ်လို့ တွေ့ရင် ဝိုင်းကန့်ကွက်ကြပါ..။
အလကား ဝန်ဂျီး ဇော်မင်း သူတစ်ယောက်ထဲသိ သူတစ်ယောက်ထဲတက်တယ်များထင်နေလားမသိဘူး.. ပြည်သူတွေထဲမှာလဲ မင်းတို့ ဝန်ကြီးတွေထက် တော်တဲ့.. တက်တဲ့.. ထူးချွန်တဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်.. ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် မိုးလေးဝသပညာရှင်.. စတဲ့ ပညာရှင်တွေအများကြီးပါတယ်.. မင်းတို့က မင်းတို့စားထားတဲ့ ဟာတွေ ပြန်အန်ထုတ်ရမှာစိုးလို့ ရှေ့ဆက်တိုးချင်တာမဟုတ်လား… မီဂါဝပ် ၁၅၀၀ တောင်သုံးလို့မကုန်သေးဘူးတဲ့.. စောက်ရူး…
ဟုတ်တယ်နော်။ဒီလူတွေ ရူးနေပီထင်ပါတယ်။နွေအချိန်မှာ တောင်ဒီတိုင်းဖြတ်ကူးလို့ ရနေပီ။ခုတခါရေကာတာ ထပ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ ဧရာဝတီမြစ်က မြို့ထဲကမြောင်းလောက်တောင်ရေရှိပေါ့မလား။
ဟောပြောပွဲ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် http://www.first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10112:save-the-irrawaddy-&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၊
ကချင်ပြည်နယ် နဲ့ ဧရာဝတီကို စောင့်ရှောက်ကြပါစို့
ကဒါဖီ တောင် ပြုတ် ကျသေးတာပဲ ၊အားလုံး စည်လုံး ကြဖို့လိုနေပြီ။ သခင့် အားရကျွန်ပါးဝ တွေကိုဆန့်ကျင်ကြ ။။။။။။။
ပေါက်ဖော်တွေကို တို့ပြည်သူတွေလို့ သဘောထားပီး နှစ်များစွာ
မလုပ်နိုင်အောင် အချိန်ဆွဲလို့ကော မရဘူးလား .. ။
လွန်ပီးပေမဲ့ ဧရာဝတီကို ကာကွယ်နိုင်အောင်လေ …